अध्ययन भन्छः स्लिम केटीहरूको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा बढी खुसी हुन्छन् । यसरि ? – Ramailo Sandesh
काठमाडौँ । विवाह एक शाश्वत सत्य हो। विवाहको फल खाने पनि पछुताउँछ नखाने त झन् नपछुताउने कुरै भएन भनेर कहानी नै बन्ने गर्दछ। यो बिचमा विवाहलाई लिएर अनेक मान्यता रहँदै आएका छन्।
विशेष गरी स्लिम केटीहरू आकर्षक हुने मान्यता रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय एक अनुसन्धानका अनुसार यो कुरा गलत रहेको प्रमाणित गरेको छ। अनुसन्धानका अनुसार अधिकांश पुरुषहरू मोटी महिला मन पराउँछन्।
यस कारण कि, सबैभन्दा पहिला त मोटी केटीहरू श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन् र हरेक समयमा साथ दिन्छन् भन्नुको अर्थ सजिलै छोडेर जान सक्दैनन्। नेशनल अटोनान्मस यूनिवर्सिटी अफ मेक्सिकोले गरेको अध्ययनमा स्लिम केटीहरूको दाँजोमा मोटी केटीहरूसँग सम्बन्धमा रहेका पुरुषहरू धेरै खुसी हुन सक्छन्।
अध्ययनमा भनिएको छ कि स्लिम केटीहरूको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा धेरै खुसी रहन सक्छन्। यस्ता महिलाहरू पुरुषलाई सिक्स प्याक लगायतका शारीरिक रूपमा तनाव हुने खालका कामहरू गर्न दबाब दिँदैनन्।
तर स्लिम केटीहरू यस्ता कुराहरूमा दबाब दिन्छन्। अर्को कुरा जो महिला मोटी छिन्। उनलाई मिठो परिकारहरू बनाउन झन्डै ९९ प्रतिशत आउने सम्भावना हुन्छ। यसरी खानेकुरामा पनि उनले श्रीमानको मन जित्न सक्छिन्।
अन्य कामहरूमा केही अल्छी गर्ने भए पनि खानेकुरामा मोटी केटीहरू अल्छी गर्न सक्दैनन्। अध्ययन भन्छ, मोटी महिलासँग सम्बन्धमा भएको केटा मानसिक रूपमा कहिल्यै तनाव नलिने प्रकृतिको हुन्छ। यसर्थः मोटी महिलाहरू शृङ्गार देखि लिएर अन्य विविध कुराहरूमा केटालाई दुःख दिने स्वभावका हुँदैनन्।
एउटा सत्य के हो भने जो मानिस मानसिक रूपमा ठिक हुँदैन उ नै धेरै दुब्लो पातलो हुन्छ। मोटी महिलाहरू कुनै पनि कुरा मनमा राखेर षडयन्त्र गर्ने खालका हुँदैनन्।
उनीहरू मनमा भएको कुरालाई तत्काल भन्छन् तर पछि सम्म राखेर बदला लिने स्वभावका हुँदैनन्। यसरी दाम्पत्य जीवन खुसी र सफल हुन्छ। उनीहरूले सन्तानलाई पनि यसरी नै प्रेम गर्छन् साथै परिवारलाई पनि।
आज चन्द्रमा मकर राशिमा, कतिबेला कुन दिशाको यात्रा शुभ रहला? जान्नुहाेस्!